Home News Dowladda Somaliya oo looga digay in ay isku daydo in ay lacag...
Dowladda Somaliya oo looga digay in ay isku daydo in ay lacag iyo musuq ku xaliso dacwada ku socoto Fahad Yasin
Safiirka dalka Kenya u fadhiya Soomaaliya Mudane Janaral Amb. Maj. Gen. (Rtd.) Lucas Kyonze ayaa fartiin uu ka siday dowlada Kenya u gudbiyay dowlada Somaliya taas uu looga digayay hogaanka dowladda Somaliya in ayan faraha la galin dacwada iyo baaritaanka ay wadaan hay’adaha socdaalka iyo maxkamadaha dalka Kenya ee lagu baarayo danbiyadii uu Fahad Yaasin ka gaystay dalka Kenya.
Asbuucii hore ayaa ay ahayd markii madaxa hay’adda NISA Xuseen Cusmaan (Calool-kuus) uu lacag keenay dalka Kenya isaga oo rabay in uu ku musuqo hay’adaha sharciga ee dalka Kenya. Kulan gaar ah oo ay la qaateen qaar ka mida saraakiisha amniga ee dalka Kenya ayaa Mudane Xusseen Caloolkuus loogu sheegay in lala socdo dhaq-dhaqaaqiisa isla markaana looga digay in uusan isku dayin in uu faragashado arimaha u gaarka ah dalka Kenya.
Fahad Yaasin ayaa waxaa uu asbuucayadii ugu danbeeyay uu lacag ku bixinayay in dacwada ku socoto isaga la baa’biyo. Waxa uu horay u qabsaday qareeno iyo dalaalo laakiin ilaa iyo hadda waxba kuma soo kordhin dacwadiisa. Madaama dacwada Fahad Yasin ay gaartay hogaankii ugu sareeyay dalka , cid-kastaa oo uu laaluushi lahaa waa ay ka carartay iyada oo ka baqaysa in la xiro.
Dalka Keyna ayaa waxa hadda ka socda olole lagula dagaalamayo masuqmaasuqa, waaan ilaa hadda xabisga la dhigay in ka badan 130 mas’uul oo shaqooyin kala duwan ka hayay dalka Kenya. Fahad Yaasin ayaan marnaba ku soo noqon karin dalka Kenya, waxaana la hubaa in la xiri doono hadii uu ka soo dago garoonada dalka Kenya.
Previous articleRag Katirsanaa Al Shabaab Oo Lagu Soo Bandhigay Deegaano Hoostaga Gobolka Sh/hoose
Next articleVideo:-Gudoomiyaha Degmada Xamar-weeyne oo la ilmeeyay Musuq maasuqa iyo Boobka ka socda Gobolka Banaadir